Isimo inqubomgomo oxhumanisa
http://links www.knwautobody.com bamukelekile ukuba le website [ezenziwe ngokuhambisana nemigomo yale nqubomgomo oxhumanisa].
[Le nqubomgomo oxhumanisa kuhloswe ukuba bakusize lapho ukuxhuma kule website.] NOMA [Ngokusebenzisa le website uyavuma ukuthi sizibophezele imigomo nemibandela yale nqubomgomo Ukuhlotshaniswa.]
Links ikhomba http://www.knwautobody.com akufanele udukisa.
Ifanele isixhumanisi umbhalo kumele njalo isetshenziswe.
[Ngezikhathi ezithile singase ubuyekeze isakhiwo URL website yethu, futhi ngaphandle sivumelana ngokubhala ngenye, you are necala for kokubuyekeza links wathi.] Akumelwe usebenzise logo yethu ukuxhumanisa kule website (noma ngenye) ngaphandle kwemvume yethu express ebhaliwe.
Akumelwe uhlaka okuqukethwe kule website noma usebenzise noma yimaphi ubuchwepheshe obufanayo maqondana okuqukethwe kule website.
Links kusuka kule website
Lokhu website kuhlanganisa links kwamanye amawebhusayithi ephethwe futhi eziqhutshwa besithathu. Lezi links akuzona endorsements noma izincomo.
http://www.knwautobody.com akanakho ukuphatha phezu okuqukethwe wesithathu amawebhusayithi, futhi http://www.knwautobody.com awamukeli umthwalo kubo noma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala ezingavela kusuka ukuwasebenzisa kwakho.
Uyavuma ukuthi, kufanele siyanicela ngokususwa isixhumanisi http://www.knwautobody.com ukuthi kulawulwa nguwe, uzosusa isixhumanisi ngokushesha.
Uma ungathanda ukuba ukususa isixhumanisi website yakho ifakiwe kwi http://www.knwautobody.com, sicela uxhumane nathi ngokusebenzisa imininingwane yokuxhumana ngezansi. Qaphela ukuthi ngaphandle unelungelo egal benxenxa ukususwa, ukususwa enjalo kuyoba ngokubona kwethu.]
Izinguquko kule nqubomgomo ngokuxhumanisa
Singase ukuchibiyela le nqubomgomo oxhumanisa nganoma yisiphi isikhathi sokushicilela inguqulo entsha kule
Uma unemibuzo mayelana nale pholisi oxhumanisa, sicela uxhumane nathi ngokusebenzisa imininingwane ebekwe lapha ngezansi: